Su'aal: See lagu ogaanaa bikro, gabar aan la gudin?
Author Topic: Su'aal: See lagu ogaanaa bikro, gabar aan la gudin? (Read 28386 times)
« on: September 17, 2011, 08:13:45 AM »
waxaa jirta in gabdhaha qaarkood oo la gudin lagala kulmo xiliga galmada in si fudud uu u galo geedka ninka, wax xanuun ah ma dareento dhiigna ma jiro, markaa waxey ku andacootaa gabadhii in ninka wixiisa uu yaryahay ama sabab ay u tahay qodbid la aanta ayna ku adkeysaneyso in aysan galmo horey u soo sameyn, marka maxaa lagu xaqiijin karaa.
Re: Su'aal: See lagu ogaanaa bikro, gabar aan la gudin?
« Reply #1 on: September 17, 2011, 05:06:49 PM »
Asc hasan bile, iyo dhamaan dhaqaatiirta iyo waliba xubnaha aqyaarta ah ee webkan sd. Hasan waad ku mahadsan tahay jwbta aad i siisay. Haddana ciladii waan fahmay. Tan ku saabsan ogaanshaha in ay gabadha aan la gudin ay bikro tahay iyo in kale. Aniga waxay ila tahay: - in marka hore aad go'aansatid in aad gabadha guur ka rabtid, guurkaas oo leh heshiis & shuruudo ad adag, waxa ka mid ah in marka la is bartoba la is baadho caafimaad ahaan iyo jidh ahaanba, ayadoo raali lagu yahay baadhistaas, is baadhistuna waxay ka dhaceysaa xarun caafimaad oo taqasus u leh baadhista cudurada guud (sida kuwa galmada) iyo baadhista jidhka (sida bikrada, iyo dhisnaanta ninkaba). Intaas ka dib, natiijada soo baxda ayaa lagu kalsoonaan karaa, qoyska ka yagleelmayna wuxu ahaan doonaa mid tiirar shub ah ku dhisan. Lkn haddii ay gabadh kuu ogolaatay inaad wastid oo ay haddana kugu tidhaahdo waxaan ahay bikro, taasi waa huf & hadal kama jiraan. Gabadha guurka ka hor laga jumleystay guurkeeda waa khiyaano iyo been taas oo inta badan keenta in durba la kala tago. Haddaba guur wuxu ku dhismaa isagoo nadiif ahna la helaa marka jidka toosan loo maro ayadoo kulan kasta oo wada hadal ku saabsana Allaah mar walba la xasuusto si sheydaanka looga fogeeyo kulamadaas. Hadday gabadhu diido baadhista caafimaad taasi waxay noqoneysaa 'bikro maahi'! Wa acuudu bika min sharil shaydaan. Walaal ugu dambeyn waxan isla wada sugeynaa jwbta Somalidoc tan dhaqtarka waa lama huraan.
FG. Jawaabteyda waxaan saldhig uga dhigay waayo aragnimadeyda. Mahadsanidiin walaalayaal. Asc.
Mohamad cali warsame
« Reply #2 on: April 27, 2020, 04:57:27 AM »
Quote from: Hassan Bile on September 17, 2011, 08:13:45 AM
Quote from: CilmiSabca on September 17, 2011, 05:06:49 PM
Views: 86819 January 06, 2015, 08:30:19 PM
Views: 54626 February 16, 2016, 10:07:14 PM
Views: 22904 January 17, 2017, 05:34:31 PM
Views: 44526 December 21, 2009, 07:54:40 PM
Views: 25093 December 08, 2012, 08:59:58 PM